Ngokungangabazeki, usuku lokuzalwa omunye imikhosi ethandwa kakhulu futhi kulindelwe e kokubili ngabantwana nangabantu abadala. Futhi isikhathi eside ithuthukiswe isiko emangalisayo ukunika lolu suku usuku lokuzalwa izipho ukubingelela kwenza leli holide abafiseleka nakakhulu ngoba hero of the isikhathi. Namuhla lokuzalwa imikhonzo - umalokazana wakhe, omunye omusha, kodwa kubaluleke kakhulu ukuba namalungu omndeni wakho.
Ngo-umthetho - umuntu ozithandayo yendodakazi yakho ethandekayo, futhi ngenxa yalokho, omunye wabantu eduze kwakho, ubuhlobo obuhle ukuthi uyoqinisekisa ukuthi ukuthula Imininingwane kwengqondo nenjabulo.
Ake sithi kakade yathathwa okwesikhathi lokuzalwa ezinhle samanje futhi bazimisela ukwenza lolu suku olukhethekile ukuze iqhawe usuku, kodwa okwanelisa kunakho konke ukwethula lokuzalwa imikhonzo umkhwenyane ngamagama nangezithombe uthole impendulo ngesimo ukubonga emehlweni akhe icwebezela futhi ukumomotheka. Ngakho-ke, ngeke ukwazi ukwenza ngaphandle eliphezulu ukubingelela umbhalo kungaba akwazi ukuzindla ngokugcwele yonke imizwa yakho efudumele futhi obukhethekile kuso.
Nokho, musa ngicasuke uma ungeyena yinkakha amazwi. Into esemqoka ukuthi inkulumo yakho bayokhishwa inhliziyo kulekelelwa gleam esweni lakhe. Futhi kuyakufanelekela it. Kodwa namanje uma ufuna ukusho okuthile onesizotha ngaphezulu, mhlawumbe ngisho asesimweni senkondlo, ngeke basisize kwe-inthanethi.
Kuze kube manje, World Wide Web, sebuningini ukuzijabulisa Intanethi, lapho indodana yakhe-ukuhalalisela ngosuku lwakhe lokuzalwa ingatholakala kalula. On ngamunye wabo ungakhetha uhlobo nezifiso obathandayo lowo uzomvumela ukuba nomuzwa wokuthi umthathile emkhayeni wabo. Ukuze kuqinisekiswe ukuthi kuyoba mnandi kakhulu.
Ngokwesibonelo, ungakwazi sithathe lutho kusuka izifiso Tiffany futhi ukuhlolwa, lapho kuwo ngamunye ngokuqinisekile ufisa impumelelo, impilo kanye nenhlalakahle.
Siyakuhalalisela zingase zishintshe kakhulu - esingathí sina kodwa futhi onesizotha, kumnandi futhi "cool". Njengomthetho, uzilungiselele kokubili temibhalo yephrozi netindzaba futhi evesini. Ngaphezu kwalokho, World Wide Web namuhla uyakwazi ukunikeza imibhalo ukubingelela yonke ukunambitheka kanye nganoma iyiphi ubukhulu. Ngakho-ke, noma ubani ofuna ukuba ukuhalalisela abathandekayo babo nalobo umsizi electronic usizo ukubhekana naso kalula.
Noma kunjalo, umbhalo congratulatory ukuthi ngeke uyenze eyakho, wasinikeza umphefumulo, kuba okungcono. Believe me, akunzima. Ngokwesibonelo:
"Ndodana yami ethandekayo emthethweni! Ngalolusuku emangalisayo, sifuna ukuba ufisa impilo nomndeni inhlalakahle.
Ake ukudabuka anqikaze, kodwa uhambe ngenjabulo kuze kube phakade! Ngokufanele waphila ngokugcwele ukuphila, uthando nokuthandwa phakade! "
Ngakho, namuhla, celebration yakho ekhaya - lokuzalwa imikhonzo umalokazana. Ngakho-ke, ekuseni zonke nezilwane zakho umatasa izinkinga emnandi. Phela, ngakho kukuningi okwakudingeka kwenziwe, ukuhlobisa igumbi bese ukulungiselela dinner iholide. Nokho, ukudala esimweni zemikhosi - kuba iholide, evelele ezizosebenza njengoba ukudla samaholide yokudumisa lokuzalwa. Lokhu kusho ukuthi indodana yakho emthethweni ungeze lokuzalwa umndeni amaholide piggy bank manje iholidi umndeni wakho uyoba eyodwa ngaphezulu.
Kodwa kuthiwani uma umalokazana ngosuku lwakhe lokuzalwa, ngoba noma ngabe yisiphi isizathu, akuzona lezi zinto? Kulokhu, basisize zanamuhla wokuxhumana. Izilokotho zosuku lokuzalwa umalokazana ingathunyelwa kuselula nge-SMS kwesokudla kusayithi nge siyakuhalalisela lokhu format. Ikakhulukazi ngoba abalithandayo likhulu kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi athokozise usuku lokuzalwa ngokuyala izwi lokubingelela ngaye, lapho uzowezwa amazwi uhlobo ikheli lakhe, kanye ukubingelela zomculo, okuyinto kungaba usizo olukhulu. Kodwa uma uthanda inkimbinkimbi, awukwazi ukucinga izindlela ezinjalo, kodwa umane wenze ucingo, futhi ngobuqotho yayilwile noHadarezeri.
Ngelilodwa nje, kungakhathaliseki ukuthi babephathwa ukuba ilungu elisha lomndeni wakho, ukuze sihlale sinobuhlobo obuhle futhi wobungane kuwo, udinga ukwethula lokuzalwa imikhonzo umalokazana wakhe, kulandela yakhe yasekhaya. Lokhu kuzosiza ukuba azizwe ekhaya phakathi kwenu bese sikukhokhela nesimo sengqondo esifanayo ezinhle. Ngakho khetha kuhle kuye futhi simfisela inhlanhla siyakuhalalisela ngalolu suku of injabulo yomkhaya, impumelelo kanye ukwaneliswa kwezifiso zokusungula. Ake indodakazi yakho iyoba yimpumelelo kakhulu futhi umyeni abajabula kunabo bonke emhlabeni.
A wedding ngaphandle toastmaster akukwazi!
Cycas: amaqabunga phuzi, ukusiza isitshalo
Indawo Syria - isimo sidilizwa-Asiriya
Pisces (Zodiac uphawu): Yini izimpawu abamele efanelekayo kantsi asihambisani ka umlaza